Joornaalka 'Airbrush' ee majaladda Tallaabada ah waxaa laga heli karaa dukaamada buugga ee 7 waddan laga bilaabo 2019
Tallaabada Tallaabada Cabbir-bararka ayaa ah joornaallada loogu talagalay dhammaan farshaxan-yaqaannada-hawada: laga bilaabo bilowga ilaa kan horumarsan, ka-soo-saareyaasha hawada ee caadiga ah illaa naqshadeeyaha, jirka iyo turjubaanka macaamiisha illaa sawir-yaqaan xirfad yaqaan ah.
Tallaabada Tallaabo-qaadista ee loo yaqaan 'Bulbush Tallaabo-Talaabo' waxaa loogu talagalay dhammaan dadka daneynaya mawduucyada wax-u-sheegidda hawada ee wax-ku-oolka ah oo doonaya inay horumariyaan xirfadahahooda hawad-qaadista iyagoo adeegsanaya tallooyin adeegsanaya hal abuur leh iyo macluumaad aasaasi ah.
Cirib tirka tallaabo-tallaabo waxay ku siisaa tilmaamo-talaabo talaabo talaabo ah oo loogu talagalay sawirada cirib-bararka heerka heerarka kala duwan ee dhibaatooyinka. Waxay bixisaa aqoon aasaasi ah iyo talooyin xirfadeed, waxay soo bandhigtaa alaabada hadda jirta iyo farsamooyinka ugu dambeeyay waxayna soo bandhigaysaa warar iyo warbixinno kusaabsan mowduuca hawada sare iyo muuqaalka.
Tallaabada Cabbirbaradka Tallaabada waxay ka kooban tahay muuqaal ballaaran, wax ku ool ah iyo hal abuur leh oo ka kooban: taxane aasaasi ah oo wargelin ah, sameynta warbixinno, wareysiyo faneed iyo faylalka, bandhigyada wax soo saarka iyo tijaabooyinka iyo sidoo kale dhacdooyinka hadda jira iyo warbixinnada la taaban karo ee kugu casuumaya inaad aqriso, baadho, dib u eegto soo qaado buugyaraha.
Laga bilaabo mawduuca cusub 01/19, daabacaadda luqadda Ingiriisiga ee 'Airbrush Step' by majaladda Step ayaa sidoo kale lagu iibin doonaa buugaagta iyo dukaamada joornaalada ee 7 waddan, oo kala ah Mareykanka, Boqortooyada Midowday, Isbaanishka, Spain, Boortaqiiska, Brazil, Kanada iyo Australia . Joornaalka 'Airbrush' ee majaladda 'Stepbrush' waxaa lagu daabacay luqadda Ingiriisiga muddo 11 sano ah. Illaa iyo hadda, nuqulada waxaa kaliya lagu iibiyay bakhaarada sahayda lagu buufiyo, iyada oo loo marayo diiwaangelinta iyo sidoo kale khadka tooska ah.
Sababta oo ah xaqiiqda ah in qaybinta caalamiga ah laga maamuli doono Boqortooyada Midowday, qiimaha koobiga ee dulsaarku wuxuu muujin doonaa 6,99 GBP. Daabacaadda iyo daabacaadda wali waa “laga sameeyay Jarmalka”. Kooxda ASBS waxay si gaar ah ugu hanweynahay in joornaalada laga heli doono bakhaarada buuggaagta ee Barnes & Noble ee ku yaal Mareykanka. Qiimaha nuqul ee Mareykanka wuxuu noqon doonaa 12.99 USD.
Sababta fasaxa awgeed, dhoofinta caalamiga ah ee arintu waxay bilaabmi doontaa oo keliya bisha Janaayo, sidaa darteed waxay qaadan kartaa ilaa Febraayo ilaa joornaalada ay gaari doonto dukaamada ku yaal wadamada aan soo sheegnay. Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan dukaamada qaaska ah iyo tafaariiqda ayaa la heli doonaa bartamaha Janaayo.
Ma jiraan dhejinno laxiriira.